Nabil Investment को
लगानीको सही शुरुवात
अनलाईन Demat खाता : सुरक्षित पनि, सरल पनि
अनलाइनबाटै खाता खोल्नु भनेको नै आफ्नो, र आफ्नो परिवारको सुरक्षा रोज्नु हो। घरै बसेर खोल्न मिल्ने Nabil Invest को Online Demat खाता आवेदन प्रकृया एकदमै सरल र सुरक्षित छ।
के साँच्चै नै अनलाईन हो त?
कि आवेदन मात्र अनलाईन हो?
यो खाता खोल्ने विधी पूर्ण रुपमा अनलाइन नै हो।
नबिल ईन्भेष्टको अनलाइन Demat खाता खोल्ने विधिबाट भरिएका र त्यसपश्चात Meroshare र Demat खाता वापत लाग्ने दस्तुर भुक्तानी गरेका सबै खाताहरु अनलाइनबाटै खुल्छन् र खाता खोल्दा लाग्ने दस्तुरको भुक्तानी पनि अनलाईनबाटै गर्न सकिन्छ।
विद्यमान धितोपत्र बोर्डको तथा सिडिएस् एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको नियमानुसार आफुलाई पायक पर्ने नबिल बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालय वा नबिल इन्भेष्ट (नक्साल) मा आफ्नो अनलाईन डिम्याटबाट प्राप्त Reference Number र सक्कल नागरिकता वा आधिकारीक परिचयपत्र सहित उपस्थित भई सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको।
तर विद्यमान परिस्थितीमा खोलिएको खाताहरुलाई भने तोकिएबमोजिमको आफ्नो सक्कल नागरिकता लिई खिचिएको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने र तत्पश्चात व्यक्ति पहिचानको लागि टेलिफोन वा अन्य अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्क गरि पहिचान भएपश्चात खाता नम्बर उपलब्ध गराइने छ। यस अनलाइन विधीबाट खाता खोल्ने खातावालहरु व्यक्ति प्रमाणिकरणको लागि यस कार्यालयमा धाउनु पर्नेछैन।
आजै अनलाईन DeMat खाता खोलौं।
कसरी खोल्ने Nabil Investment मा अनलाइन Demat खाता?
अनलाईन फारम भर्नुहोस्
Nabil Investment को अनलाइन Demat खाता आवेदन भर्नुहोस् र Save बटनलाई थिच्नुहोस्।
दस्तुरको भुक्तानी गर्नुहोस्
यसरी आवेदन भरिसकेपछि आउने स्क्रिनमा Reference No. नोट गर्नुहोस् र Pay Online मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंले eSewa, Khalti, Card, Internet Banking वा Mobile Banking जस्ता माध्यमबाट मेरोशेयर र Demat खाताको दस्तुर सजिलै तिर्न सक्नुहुनेछ।
व्यक्तिगत Verification गर्नुहोस्
व्यक्तिगत Verification (पहिचान यकिन) गर्न प्रष्ट रुपमा देखिने गरी नागरिकता वा पासपोर्ट सहित आफ्नो अनुहार देखिने गरि खिचिएको फोटो फारम भर्दा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनलाइन Demat खाता खोल्न थप प्रश्न भएमा आजै फोन गर्नुहोस्।
Demat खाताको नविकरण कहिले गर्ने?
DEMAT खाता खोल्दा गरिएको दस्तुर भुक्तानी १ वर्षसम्मको लागि हो। त्यसैले १ वर्षपछि फेरी नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।यदि तपाईं आजीवन दस्तुर बुझाउने झण्झटबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आजीवन Demat खाता बारे अवश्य बुझ्नुहोला।